WOWOW qasabadaha jikada ee gacmaha keli-keli ah leh oo soo jiida buufinta
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid qasabadaha Jikada / WOWOW Qasacadda Jikada-Jooji-Kaliya Hal-Gacan-kujiye
WOWOW-Handle Ple-Out Sprayer jikada Faucet
Si loogu haboonaado, tubbada cuntada ee jikada waa in lagu doortaa meel sare, iyo meesha biyuhu ka baxaan. Waxaa ugufiican in laga dheereeyo dusha sare qashin-qubka, oo waa inaysan biyuhu biyuhu buufin. Haddii jikada ay ku jiraan tuubooyin biyo kulul oo kulul, tubada noocan oo kale ah waa inay noqotaa labanlaab. Si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee adeegsiga, hoos u soo jiida tuubada jikada madow waxaa loo rogi karaa 360 ° guud ahaan.
Soo jiid tubbada jikada
Soo qaad tubooyinka jikada oo la yaab leh waa wax aad dhif u ah. Tubooyinka jikada noocan oo kale ah waa kuwa ugu yar ee tubooyinka jikada ee suuqa laga heli karo. Hadana waxay kuu soo bandhigaan howlo fara badan oo howleed. Muuqaalka ugu weyn ee tuubada jikada ee WOWOW waa tuubada biyaha ee dhaadheer oo aad ku tegi karto gees walba oo weelka jikada iyo hareeraha. Gaar ahaan marka aad haysato weelka jikada ee jikada laba jibaar ah, tubadan qolka jikada ee WOWOW ayaa ku siinaysa dhammaan wixii aad u baahan tahay. Qolka jikada soo jiidista dhinaca kale waxay leeyihiin foorno gaagaaban. Madaxa buufiyaha si kasta oo ay tahay ayaa loo yaqaan 'spout', laakiin ma dareemi doontid tan. Waxaad uun uga faa’iideysan doontaa tuubada biyaha ka weyn.
Faa'iido kale oo weyn oo ah qolka soo jiidashada jikada waa naqshadda 3-qaybood ee u gaarka ah oo inta badan waarta. Way fududahay in la rogo tubada jikada 360 digrii. Qolka soo bixista jikada jikada ayaa horeyba u yaraa sidii loogu heli lahaa marin fiican oo jikadaada jikada ah. Qashinkan yar oo jiidista jikada ayaan samayn doonin wax carqalad ah. Laakiin maadaama aad u rogi karto tubadan jikada 360 digrii sidoo kale, waxaad fursad buuxda uheleysaa inaad kusoqoto jikadaada marwalba, adoon carqalad laheyn. Aaladdaani waxay ka sameysan tahay agab waara, sidaas darteed kani weligiis wuxuu ahaan doonaa weligiis.
Naag saliidaysan oo naxaas ah oo daadata tubada jikada
Dhameystirka madow ee tubadan jikada waa mid qaas ah, mana la kulmi doontid dhammeystirka noocan ah waxyaabo badan oo ku saabsan qurxinta jikada. Waad ka sameyn kartaa naqshadda jikadaada khaas ahaan midabkan qolka jikada. Qolka jikada ee WOWOW ka bixida jikada ayaa ku dhammaaday naxaas saliid ah oo go'day. Sidan ayay umuuqataa in ay u egtahay taleefoonka 'retro'. Taasi waxay siineysaa qaabka jikadaada dhab ahaan taabasho gaar ah. Isku darka dhammaadka rubuc madow, waxay siisaa qurux badan jikadaada sidoo kale. Dabcan waa waara, sidaa darteed tubada qolkaaga jikada ayaa la ilaaliyaa muddo dheer.
Kahor intaadan go'aan ka gaarin tubada cuntada ee jikadaada, waa inaad si qoto dheer uga fikirtaa ka hor intaadan go'aan gaarin. Cilmi baaris ayaa muujisay in tubada qolka jikadu ay tahay mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee jikada kasta. Sidaa darteed, dareenka dadka ayaa si toos ah loogu jiidayaa tubada qolkaaga jikada. Taasi waxay kuu sheegaysaa inaad si xikmad leh u xulo tubada jikadaada. Waxay umuuqataa inaad saameyn weyn kuyeelan karto tubada jikadaada. Sidaas awgeed, taasi waxay ka dhigan tahay hab wanaagsan, laakiin sidoo kale qaab xun. Xaqiiqdii waxaad jikadaada siin kartaa kuleyl aad u weyn oo wata tubada jikadaada. Dhanka kale, markii aad gaarto go'aan qaldan, waxaad sidoo kale hoos u dhigi kartaa qurxinta jikadaada. WOWOW waxaan jecel nahay inaan ku siino tubooyinka jikada ee ugu fiican qurxinta jikadaada.
Qashinka jikada oo si caddaalad ah loo qiimeeyo
Maaddaama aad lacag badan ku kharash garaysay naqshadaha jikadaada, waxaad dooneysaa in wax waliba ay hagaagaan. Waxaad jeclaan laheyd inaad dhisto jikadaada riyada, jikada aad had iyo jeer ku riyoon jirtay. Si aad u sameyso jikada aad ku riyoonayso, waxaa muhiim ah in tubooyinka jikadaada lagu daro qaabeynta jikadaada koowaad. Sidaan horay u soo sheegnay, tubada jikada waa qeyb muhiim ka ah qaabeynta jikadaada, sidaa darteedna waa in had iyo jeer lagu daraa bilowga. Si kastaba ha noqotee, naqshadeeyeyaal badan oo jikada ka mid ah kuma jiraan, oo sheygan adiga iska dhig ilaa aad wax kala iibsatid. Hase yeeshe waa muhiim in dooro tubada qolkaaga si fiican u sameyso qayb muhiim u ah qurxinta jikadaada.
Dhanka kale, xaqiiqda ah in tubbada jikada lagu dhex darin naqshadda jikadaada waxay kuu keenaysaa faa iido: waxaad dooran kartaa qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta aad ku heli karto suuqa. Ma tihid macmiil kuu iibiyaha jikadaada kaasoo waliba ku farxi lahaa ama labanlaabi lahaa qiimaha tubada jikadaada laga soo qaado. Markii aad dooraneyso tubada cuntada ee jikada naftaada, waxaad si sax ah u dooran kartaa tubada jikada ee aad rabto. WOWOW waxaad kubixineysaa qiimo cadaalad ah tubada jikadaada, iyo sidaa darteed waa doorashada ugu fiican adiga iyo boorsada jeebka.
Qulqulka biyuhu waxay soo jiitaan tubada jikada
Qashin-qaadka jikada ee WOWOW wuxuu ka kooban yahay qulqulka biyaha oo muhiim ah oo ay ka muuqato laba hab-biyood: socodka iyo buufin. Hababka socodka biyahaan waad ku dhaqi kartaa, ku buuxin kartaa, ama ku luqluqi kartaa qalabka jikada jikadaada. Maaddaama tubada soo jiidashada jikada ay kuxiran tahay soo-saare ABS-ka cusub, waxay dammaanad u tahay durdur iyo biyo joogto ah. Ka sokow, astaantan gaarka ah ayaa waliba kuu badbaadinaysa isticmaalka badan ee biyaha. Soo-saarehani wuxuu kuu keydinayaa 50% adeegsiga biyaha oo aad sida muuqata ku arki doontid biilkaaga biyaha. Alardaha si fudud ayaa looga saari karaa, si loo nadiifiyo ama loo beddelo.
Intaas waxaa sii dheer, tubadan aadka u tayada badan ee jiidista jikada waxay ka kooban tahay isku xirayaal naxaas adag oo leh bir bir-qabad leh, iyo tuubbo biyo adag oo bir aan nadiif ahayn. Sababtoo ah agabkan aadka u sareeya, tubada jikada laga soo qaado ayaa laga yaabaa inay iska caabiso miridhku iyo nabaad guurka. Xirmooyinka dhoobada dhoobada ah ayaa ka daadanaya bilaash si ay kuugu siiyaan raaxada ugu dambaysa adiga oo isticmaalaya tubada jikada. Maaddaama tuubbada biyuhu sidoo kale ka samaysan tahay birta birta, waxay bixisaa naqshad ka-hortag qarax mana xirto oo jeexjeexi maayo. Tuubada biyuhu waxay had iyo jeer si fudud ugu laaban doonaan meeshii hore. Waxay u istaagi kartaa cadaadiska biyaha oo sarreeya dhib la'aan.
Caymiska ka bixida tubada jikada
Qashinkan weyn ee jikada laga soo qaado ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa isticmaalka ganacsiga. Sababtoo ah dhammaadkeeda kal-madow ee gaarka ah, waxay si fudud u adkeysan kartaa miridhku iyo xoqidda. Sidaa darteed waxay bixisaa tayo dheer oo waara. Sidaas awgeed, WOWOW sidoo kale waxay awoodaa inay ku siiso muddo 5 sano ah oo dammaanad qaad ah. Maaddaama alaab-qeybiyeyaasha jikada badankood ay bixiyaan kaliya hal sano oo dammaanad qaad ah, WOWOW hubaal ayaa isbedel weyn ku sameyneysaa halkan. WOWOW waxay dhaafaysaa dhammaan heerarka warshadaha, iyo inaad ku aragto dhinackasta oo ka mid ah tubadan jikada. Qolkaaga jikada laga soo qaado jikada waxaa ku jira caymis sidoo kale 1-maalmood oo lacag celin la-celin ah ayaa dib loo soo celinayaa. Sidan ayaad qatar ugu maareyneysaa tubadan jikada weyn. Faa'iidooyinka tubada soo jiididda jikada oo si kooban loo sheego: • Waxay ku siisaa wax-ku-cabbid jikada kasta
• Saliid madow oo dib loo soo saaray oo sifeeyay naxaas ahaanta
• Naqshad yar
• Tuubada biyaha ka soo baxaan
• Waxay ka samaysan yihiin naxaas aad u tayo sareysa iyo alaabo bir daxalan
SKU: 2310501Q Categories: Qubeyska jikada, Jiid qasabadaha Jikada Tags: Jikada jikada ee jikada, Hal Gacan Biran, Jikada Birta
Soo Bixi Qubeyska jikada
Shaqada Steam & Buufinta
Hal Saxan Heer Sare ah